HOLLAND VS ENGLAND: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
HOLLAND VS ENGLAND: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Raage March 23, 2018
(Amesterdam) 23 Maarso 2018 – Netherlands ayaa caawa martigelinaysa England oo ay u gogoshey gegada Amsterdam Arena, jeer ay England isu diyaarinayso ka qaybgalka Koobka Adduunka 2018 oo ay Holland usoo bixin.
Laacibka dhexe ee Tonny Vilhena ayaa ciyaartan ganaax ku seegi doona. Ma se jiraan walaacyo dhanka dhaawaca ah oo ka taagan dhanka Netherland.
Harry Kane ayaa ciyaartan ku seegaya dhaawac anqowga ah, sidaa darteed baan qannaaska Spurs loogu soo darin xulka Seddexda Libaax. Waana laacibka qura ee aanu ku tashan karin macallinka Gareth Southgate marka ay timaaddo ciyaartan.
Kulamada ay soo dheeleen
Dutch iyo Ingiriis 21 jeer bay kulmeen, min 6 jeer bay kala badiyeen, halka ay 9 jeerna dhibcaha si cadaalad ah u qaybsadeen.
Safafka suurtagalka ah
Netherlands ( 4-3-3 )
Goalkeeper: Cillessen (GK)
Defenders: Ake (LB) van Dijk (LCB) de Ligt (RCB) Veltman (RB)
Midfielders: Strootman (LM) Blind (CM) Propper (RM)
Attackers: Depay (LW) Babel (ST) Berghuis (RW)
England ( 4-4-2 )
Goalkeeper: Hart (GK)
Defenders: Bertrand (LB) Stones (LCB) Maguire (RCB) Walker (RB)
Midfielders: Livermore (LM) Dier (LCM) Henderson (RCM) Loftus-Cheek (RM)
Attackers: Rashford (LS) Vardy (RS)
GERMANY VS SPAIN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
RUSSIA VS BRAZIL: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!